Mbola Hanjakazaka Amin’ny Fifidianana Hatrany Ve ny Antoko Nitondra Tao Malaizia Nandritra ny 50 taona? · Global Voices teny Malagasy
Mbola Hanjakazaka Amin'ny Fifidianana Hatrany Ve ny Antoko Nitondra Tao Malaizia Nandritra ny 50 taona?
Voadika ny 06 Mey 2013 14:28 GMT
Lohahevitra nanakoako tamin'ny Fifidianana Ankapobeny faha-13 notontosaina ny 5 mey 2013 tao Malaizia ny fikaroham-piovana, na ‘ubah’ (ova amin'ny teny Malay). Misy teny filamatra malaza miverimberina manao hoe ‘ini kalilah, ubah’ izay midika hoe ‘manodidina izao fotoana izao, manatona ny fiovana’.
Tamin'ny fitenenana izany, tsy mazava loatra ny ho fizotry ny fifidianana, ary nitatitra ny Fantsona News Asia fa mbola mety handresy ihany ny vondron'antoko mitondra Barisan Nasional (BN), saingy anaty elanelana kely. Efa atsasaky ny taonjato izay no efa nitondran'ny BN.Nitady fiovana eo amin'ny governemanta i Shufei:
Tsy natao ho amin'ny politika aho. Mankahala azy aho no tena marina, mahatonga ahy ho mora mihetsi-po kokoa io noho ny zavatra hafa. Mora tratran'ny fahatezerana aho raha vao mamaky lahatsoratra ahitana fitsaratsara-poana tsy misy famotorana, fitapitaka maloto, fihetsika tsy azo hamarinina, kolikoly. Mihapotika araka ny maha-olombelona ny zava-drehetra saingy potika haingana kokoa noho ireo olona nitokisako hitondra ny firenena.
Saingy tsy mieritreritra ve ianareo hoe tokony hanana safidy isika? Ny rafitra antoko roa mba ahafahantsika misafidy raha mpanolikoly ny governemanta? Tsy izany moa no atao hoe demokrasia? Tsy “shushed” na nampanginina satria ‘nahavita zavatra maro dia maro ho antsika ry zareo’. Eny, nahavita zavatra ho antsika ry zareo, fa ireo no governemantatsika. Miala tsiny aho raha mivanta-piteny, fa asan-dry zareo izany.
Mandrisika ny mpamaky azy ihany koa i Glam mba hifidy ny fiovam-pitondrana, ka ataony amin'ny alalan'ny lahatsary maro izany.
Namoaka ny lahatsarin'ny mpifidy ao Penang ihany koa i Anil Netto miantso ny isian'ny fiovana eo amin'ny firenena ihany koa.
Efa manana ny heviny ny olona.
Tsy momba antson'olona hanaovana tonelina (lozoka), lalambe mihantona vaovao na trano manjelanjelatra manaka-danitra maro; fa antson'olona miantso ny hampitsaharana ny kolikoly eto amin'ny firenena sy fiovana demokratika eo amin'ny sehatra federaly
Namelabelatra ny praiminisitra Najib Razak ho ‘Soavalin'i Troà'=fahavalo tafiditra ao amin'ny Politika Malayziana i Thomas:
Manerana ny firenena amin'ireo takelaby lehibe an'ny BN, na amin'ny zavatra natao printy na doka sy vaovao amin'ny fahitalavitra, dia ny tsiky malefaka sy mahafinaritr'i Najib hatrany no hitanao. Hatramin'izay teo amin'ny tantaran'ny fifidianana ankapobeny nitranga teto amin'ny firenena tsy mbola nisy fanandratana olona fa fanandratana idealy na vinan'ny antoko ho an'ny firenena . Saingy soavalin'i Troà i Najib Razak, natsangan'ny orinasam-pifandraisana aman'olona matihanina tahaka an'i APCO sy ny fanampian'ny orinasam-pampielezam-peo sy sary mbamin'ny gazety an-tsoratra famakin'ny besinimaro mpiray donak'afo aminy. Tonga any amin'ny faratampony ny fanamboamboarana natao taminy ka manova azy izay politisiana mpandala fatratra ny zon'ny Malay ho iray amin'ireo mpankasitraka ny soatoavin'ny 1Malaysia ho amin'ny tsy fanavahana sy ny fahazakana [ny hafa].
Heniky ny fitaovam-pifidianana tahaka ny afisy, trakitra, saina ary takelaby goavana i Malaizia. Saripika noraisin'i Hon Keong Soo, Copyright @Demotix (5/2/2013)
Sambany ihany koa no nomena alalana ho azo atao amin'ny fifidianana Malayziana ny safidy alefa paositra. Manoratra ny fientanentanan-dry zareo amin'ny mety hisian'ny fiovana governemanta i Chelliah:
Amin'izao fotoana anoratako izao dia miposaka ny masoandro ao Malaizia ary andro vaovao no handehanako matory satria takariva izany eto Angletera. Misy zavatra mampihomehy mifandaka ihany ao anatin'izany. Nandao an'i Malaizia aho 32 taona lasa ary na dia an'arivony maily lavitra aty aza no misy ahy dia mientanentana aho mba hitranga tokoa ny ‘Ubah’ (ova amin'ny fiteny Malay) ao amin'ny 0505.
Lasa fantatra ny fifidianana na G13, manahy aho fa ho dingana ara-politika ho amin'ny fampisehoana ny firaisana Malaiziana manerantany. Tsy mino aho hoe izaho irery no manantena fiovana raha monina an-tany vahiny. Mety ho azonao vinaniana ny halehiben'izany ho an'olona iray izay tsy miaina ny andavanandrom-piainana entin'ny fitondrana heverin'ny Malaiziana maro ho mpanao kolikoly sy didiko fe-lehibe. Mety hoe tsy monina any aho fa efa niaina nandritra ny taona maro ny fiainana tarihin'ny fanjakana.
Namoaka lahatsary momba ny fifidianana amin'ny alalan'ny paositra izay notontosaina herinandro alohan'ny 5 mey ao Melbourne ny JOM Magazine, gazety-boky izay mitodika any amin'ny fiaraha-monina Malaiziana.
Misy ihany koa ny lahatsarin'ny mpifidy Malaiziana ao London:
Noho ny fampiasan'ny olona amin'ny ankapobeny ny tambajotran-tserasera dia tsy mahagaga raha nomena anaram-bositra hoe fifidianan'ny tambajotran-tserasera ity fifidianana ity.